सुजन पन्त | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Saturday, 27 November, 2021
एआईजीको दरबन्दी थप : हिजो पनि हुन्थ्यो आफ्नालाई नेतृत्व सुम्पने ‘फोहोरी खेल’ access_timeमंसिर ८, २०७७
प्रहरीमा ०४२ भदौ ५ गते अघि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थिएन । सोही वर्ष ‘खास व्यक्ति’का लागि पहिलोपटक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरियो । त्यस यता प्रहरीमा त्यस्ता खास व्यक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने र घटाउने खेल बारम्बार हुँदै आएक...
७ महिनामै ओली सरकारको यूटर्न : कसको चलखेलमा फेरि डीआईजीको दरबन्दी थपियो ? access_timeमंसिर ६, २०७७
काठमाडौँ । प्रहरीमा दरबन्दी थप्न वा घटाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्छ । तर, ०७६ चैत २८ मा बढुवा समिमिले रिक्त दरबन्दीभन्दा थोरै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा सिफारिस गर्यो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको आग्र...
गृहको सिफारिसबिना किन थपियो एआईजीको दरबन्दी : विश्वराजलाई आईजीपी बनाउने रणनीति ? access_timeमंसिर ५, २०७७
काठमाडौँ । दसैँअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँच प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै गृहमन्त्रालयमा दरबन्दी थपको प्रस्ताव लग्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रधान कार्यालयको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठक...
महँगो गाडीमा सयर गर्नेको सभ्यता कता हरायो ? access_timeकात्तिक २२, २०७७
शनिबार बिहान एउटा हुन्डाई कम्पनीको क्रेटा गाडी पुतलीसडक चोकबाट बागबजारतर्फ तीव्र गतिमा हुइकिँदै थियो । भर्खरै निकालेको जस्तो थियो गाडी, ‘कालो सिसासँगै चिल्लो । प्रदेशको नम्बर थियो । एकीन गर्न सकिएन ।’ शनिबारको दिन भएर होला सडकमा छिट्टफुट्ट गाडी...
टोखा हत्याकाण्ड : आफ्नो समूहको दबदबा देखाउन आशिषको हत्या access_timeकात्तिक २१, २०७७
काठमाडौँ । टोखा नगरपालिका–४ धापासीस्थित देवी मन्दिरमा गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका–५ का २४ वर्षीय आशिष मगरको हत्या भयो । १४ कात्तिकमा छुरा हानेर उनको हत्या गरिएको थियो । हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपी रूपेश आले मगरसहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरे...
भिटेनको ‘पारा’: प्रहरीमाथि भिटेनको आक्रमण कि भिटेनमाथि प्रहरीको ? access_timeकात्तिक १५, २०७७
काठमाडौँ । एक वर्षअघि ‘यस्तै त हो नि ब्रो’ र्‍याप गीत गाएर विवादमा मुछिएपछि भिटेन भनिने समिर घिसिङलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले २०७६ कात्तिक ७ गते जावालाखेलबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला आइन्दा विवादित काम नगर्ने सर्तमा उनी रिहा भएका थिए । भ...
३ सय रोपनी जग्गाको लोभमा ठगिए पोखराका ‘भूमिहीन’ access_timeअसोज २८, २०७७
काठमाडौँ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१४ भोटेचौतारामा १ सय ६० परिवारको बस्ती छ । उक्त बस्तीमा सुकुम्बासी मात्र नभएर बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरु पनि बसोबास गर्छन् । यद्यपी सो बस्तीलाई स्थानीयले ‘सुकुम्बासी बस्ती’ भनेर चिन्छन् । त्यहाँ ३ सय र...
त्रिविको उत्तरपुस्तिका नष्ट प्रकरण : काठमाडौँका एसएसपी ज्ञवालीविरुद्व आईजीपीसमक्ष उजुरी access_timeअसोज २४, २०७७
काठमाडौँ । त्रिविको उत्तरपुस्तिका धुल्याएकोबारे अनुसन्धान नगरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली, परिसरका एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर र मुद्दा शाखाका डीएसपी देवि प्रसाद पौडेलविरुद्व उजुरी परेको छ । स्नातकोतर भौतिकशास्त्र अन्...
कुख्यात अपराधी डेभिड : जसले पसिना बेच्न मलेसिया गएका नेपालीलाई बन्धक बनाए access_timeअसोज २०, २०७७
काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहकुलबहादुर थापालाई एउटा फोन आयो । असार १४ मा फोन गर्नेले भने, ‘एउटा ब्याड न्यूज छ ।’ सो कल नेपाल राष्ट्र बैङ्कका फाइनान्सियल इन्भेष्टिगेशन युनिटका प्रमुखले गरेका थिए । रा...
९ महिनासम्म चौकीका इन्चार्जहरुले इन्सपेक्टर भन्ठानेर सलाम मात्र गरिरहे ! access_timeअसोज १९, २०७७
काठमाडौँ । अजयकुमार राय पक्राउ पर्नु अघिसम्म प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक र खरिदारको लिखित परीक्षा चलाउँदै थिए । रायले गत बुधबार पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित देव पार्टी प्यालेसको हलमा राखेर २१ परीक्षार्थीलाई पर...
सुन्धारा कारागारका कैदी रामलखनको मृत्यु जेलभित्र कि वीर अस्पतालमा ? access_timeअसोज ६, २०७७
काठमाडौँ । असोज ३, नयाँ संविधान जारी भएको विशेष दिन । संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र दशैं–तिहारमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका २८९ कैदीले राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाए । रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका–५ का रामलखन जैसवाल साढे ६ वर्षयता केन्द्रीय क...
शक्तिकेन्द्रको दबाबमा इन्सपेक्टर सरुवा, शक्तिशालीले पाए आकर्षक ठाउँमा पोस्टिङ access_timeअसोज ६, २०७७
काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीले १० दिनअघि नयाँ आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेश र नेपाल प्रहरी कार्ययोजना-२०७७ सार्वजनिक गरे । आचारसंहिताको एउटा बुँदा थियो– सरुवा बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रबाट दवाव दिन नपाउने । प्रहरी कर्मचारीले ...
भूकम्पपछि त्रसित सिन्धुपाल्चोकवासी : पानीमा भिज्दै घरबाहिर बास ! access_timeभदौ ३१, २०७७
काठमाडौँ । बुधबार बिहान ५ बजेर १९ मिनेट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । यसको केन्द्रबिन्दु सिन्धुपाल्चोकको राम्चेबजार आसपास रहेको भूकम्पमापन केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीका अनुसार...
नाकामा निरीह बन्यो प्रहरी, ‘मेरो मान्छे आउँदैछ छाडिदिनू’ access_timeभदौ २९, २०७७
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण दर बढ्दो क्रममा छ । सोमबारको अध्यावधिक विवरणअनुसार काठमाडौंमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार २८ पुगेको छ । यसैगरी भक्तपुरमा १ हजार ३२ र ललितपुरमा ११ सय ९० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।...
नागढुङ्गाको नाका पार गर्ने बहाना – ‘बुबा बित्नुभयो’ access_timeभदौ २९, २०७७
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमबाट बच्न सरकारले ११ चैत्रदेखि लकडाउन गरेको थियो । लगातार तीन महिनाको लकडाउन, काठमाडौँ उपत्यकामा जारी सटडाउन र पछिल्लो निषेधाज्ञाले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलन नदिन काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलु...
'खान नपाएर विदेशमै मर्ने अवस्था आउने भयो, सरकारले सुन्दै सुनेन' access_timeभदौ २५, २०७७
पूर्वी अफ्रिकाको टापुको देश सेसेल्समा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन । जुलाईमा त्यहाँ ११ जनालाई कोरोनाभाइरस संक्रमण देखियो । त्यही पनि सबै निको भइसके । अहिले त्यहाँ एकजनामा पनि कोरोना छैन । तर, त्यही देशमा रोजगारीमा ...
स्वास्थ्यकर्मीदेखि पत्रकारसम्मको नक्कली परिचयपत्र बनाउने धन्दा : एउटा कार्डको ५०० रुपैयाँ ! access_timeभदौ २३, २०७७
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ । सरकारले निषेधाज्ञाको बेला स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारलाई हिँड्डुल गर्न कतै रोकतोक गरेको छैन । पत्रकारहरु कार्यालयकै परिचयपत्रले सजिलै हिँड्डुल गर्न पाउँछन् । पत्रकारलाई कार्...
‘कोरोनाबारे अफवाह’ फैलाउने नक्कली डाक्टर : जसले लिन्थे ‘चमत्कार’ को ३० हजार ! access_timeभदौ २२, २०७७
काठमाडौँ । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुको धमाधम ‘मिर्गौला, आँखा र लिभर निकालिन्छ’ भनेर अफवाह फैलाउने सुवास सुब्बा लिम्बुले आफूलाई प्राकृतिक चिकित्सक दावी गरेका छन् । ललितपुरको ढोलाहिटीमा अन्तिम विकल्प प्रा.लि.उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने ...
लेनदेन, अवैध सम्बन्ध र मनमुटाव, अनि आवेगमा हत्या access_timeभदौ २१, २०७७
काठमाडौँ । घर–परिवार हरेक मानिसका लागि जीवनको मुख्य सहारा हो । तर कहिलेकाहीँ त्यही घर–परिवारबाट मानिसको जीवन समाप्त पनि हुन्छ । जहाँ मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यहीँ असुरक्षित भएर जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको स...
गीता केसी हत्या प्रकरण : श्रीमानलाई अस्पताल जान्छु भनेर भतिजसँग घुम्न जंगलतिर ! access_timeभदौ २०, २०७७
ललितपुर । भैंसेपाटी बस्दै आएकी ३९ वर्षीया गीता केसीको हत्या अरोपमा भतिजा निर्मल केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । निर्मल शनिबार बिहान भैंसेपाटीस्थित घरबाट पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गीताको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको हो । केसीको परिवारल...
आर्मी मुख्यालय जंग्गी अड्डामा गोली हानेर सिपाहीले गरे आत्महत्या access_timeभदौ १४, २०७७
काठमाडौँ । नेपाली सेनाको मुख्यालय जंग्गी अड्डाका गोली हानेर एक सिपाहीले आत्महत्या गरेका छन् । भद्रकालीस्थित आर्मीको पेट्रोल पम्पमा ड्युटीमा खटिएका एक सिपाहीले आत्महत्या गरेका हुन् । ड्युटीको समयमा ती सिपाहीले ड्युटीमा रहँदा बोकेको बन्दुकले आफ्नो कन्चटमा गोली हाने...
एउटा आरोपमा पक्राउ परेकालाई अर्कै अभियोग लगाइयो access_timeभदौ ८, २०७७
गत असार १५ गते दाङमा एक ‘स्वास्थ्यकर्मी’ पक्राउ परे । एक्सरे गर्न आएकी महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेको खबर सनसनीरुपमा फैलियो । दाङको घोराही लुहारसुरस्थित गोर्खा पब्लिक हस्पिटलको रेडियो ग्राफिक्समा काम गर्ने बबई गाउँपालिका–५ न...
कोरोना संक्रमित प्रहरी बीमा रकम पाउनबाट बञ्चित, बढ्यो असन्तुष्टि access_timeभदौ २, २०७७
काठमाडौँ । कोडिभ–१९ (कोरोनाभाइरस) को जोखिम कम गर्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ठाकुर ज्ञवालीको आलोचना भयो । जोखिम मोलेर लकडाउन कार्यान्वयमा खटिएका प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला ज्ञवा...
फिल्मको कथाजस्तो गोंगबु हत्याकाण्ड, आरोपीले डेराबाट नियालिरहिन् ‘अप्रेशन जोजो’ access_timeसाउन २७, २०७७
काठमाडौँ । गोंगबुको नवज्योती मार्गमा शनिवार राती दाङका कृष्णबहादुर बोहोराको हत्या भयो । रोल्पा रुन्टीगढीका बोहरा पछि दाङ झरेका हुन् । आइतबार विहान सुटकेशमा शव भेटियो । टुक्रा–टुक्रा पारिएको थियो । हत्या गरिएको घरबाट ५० मिटरको दुरीमा शव फेला परेको ...